Tonga soa, Guest
Username: Password: Tsarovy aho
Hadinonao ny tenimiafinao? Nanadino ny solonanarana? Hamorona kaonty
Flight Simulator X (FSX) sy Steam
FSX ary ianao
FSX ary ianao 3 taona 6 volana lasa izay #66
Misaotra anareo nandray: 20
Inona no fomba tsara kokoa hahalalana bebe kokoa noho ny miresaka momba ny ataontsika FSX, sa tsy izany?
TOKO 2. Aza mifamaly (raha misy olana dia alao any amin'ny toerana hafa, PLEASE); ary tsy maneso ny hafa
LYOKA amin'ny fiaramanidina ao amin'ny tranokala Rikoooo dia tsy hoe ampirisihina fotsiny, TSY IZANY IZANY!
Tiako ny manamarina ny fiaramanidina samihafa! Efa hatramin'ny fahazazako.
Raha ny amiko manokana ....... Izaho no Tale Jeneralin'ny American Airways VA. Mandany ny PALOTRA amin'ny fotoanako aho FSX manao entana lava be satria izany no mahatonga ny Airline ho be vola. Ny vorona ambony be dia be aho dia ny 2-747F sy 800LCF. Izahay dia manana fiaramanidina lehibe na dia samy hafa habe aza.
Ny kely indrindra eritreretiko dia ny Dash 8-100 sy ny Embraer Legacy 600.
Ny tena lehibe indrindra amiko dia ny 747s, sy 707-320, ary ny 777-200LR.
Ny zokiny indrindra dia ny Boeing 314 sy 707-320
Ny fastest dia ny Concorde, tsy misy fanontaniana. (ho fampahatsiahivana an'i "Charlie", "tsy ho sambatra aho raha tsy mandeha [mach] Mach-2 miaraka amin'ny voloko [My] afo" lol)
Ny tsindry dia tsy manontany tena ny V-22, sy ny CH-47, izay ampiasaintsika amin'ny fanidinan'ny Oil Rig ihany no manamboatra (ny manambony tena, fa haingana raha mampiasa ny alprey heh)
Ny tiako indrindra? Tena henjana izany. Tokony hilaza ny 707-320 sy C-130 aho.
Impiry aho no manidina? Eny, ho marin-toetra ... saika tsy mijanona. Hatramin'ity volana ity, nidaroka ny ora 461.39 aho, ary 206,931
Raha tsy manidina amin'ny Airline aho, dia matetika aho no manidina ny Tomcat.
Misy rohy mankany amin'ny sasany amin'ireo vorona Rikoooo ampiasaiko
B747-XXX Mega fonosana (ampiasako ny LCF amin'izany - na dia manana ny 747 megapacks rehetra aza aho nametraka lol)
Na raha tianao ny LCF ...
B737-700 American Airlines (tsy eo amin'ny fiaramanidintsika amin'izao fotoana izao fa manana izany ary FITIAVANA IT)
B777-200 (raha tsy mampiasa ny iray amin'ireo ao anatin'ity fonosana ity aho .... tena manoro hevitra azy aho!)
B707-42 (ampiasako ny dikan-kapitaly Captain Sim, fa hanandrana ity iray ity amin'ity herinandro ity! MIVAVAHA HO AN'NY REHEFA!)
FSX ary ianao 3 taona 6 volana lasa izay #69
Misaotra anareo nandray: 51
Te-hanontany zavatra vitsivitsy aho. Voalohany dia tena hadisoana niseho rehefa nanandrana nametraka ny scenery Sim Giants Gran Canaria. Ny hadisoana dia faritra Scenery (misy maromaro) tsy hita. Io rakitra fampisehoana io dia tsy mandeha amin'ny laoniny mihitsy FSX sp2. Nesorina io fa mbola misy ny lesoka.
Faharoa. Azo atao ve ny manambatra ny VC amin'ny kitapo A320 Family, miaraka amin'ny Thomas Ruth A330 / 340 ary amin'ny fomba ahoana? Samy nafidina avy eto izy ireo.
Farany farany: amin'ny Dariussssss.
FSX ary ianao 3 taona 6 volana lasa izay #72
Misaotra anareo nandray: 29
Misaotra anao Gh0stRider203 noho ianao mamoaka lahatsoratra, fantatray bebe kokoa anao izao, ary miarahaba anao ho mpandrindra ao amin'ny forum.
Dariusssss: hanaisotra ny fahadisoana dia mila manaisotra fotsiny ilay toerana misy anao avy ao amin'ny tranomboky scenery ianao FSX config. Mba hanana fijerena ilay screur aho mba hanamarina raha misy ny diso amin'ny installer. izao ve mitranga amin'ny Grand Canary sa misy scénie hafa koa?
Ho an'ny fanontanianao faharoa, eny fa mihevitra aho fa afaka mampifandray ny VC amin'ny kitapo A320 Family multiple-livery, miaraka amin'i Thomas Ruth A330 / 340. Mba hahazoana vondrona VC azafady azafady amin'ny tutorial google na Youtube
FSX ary ianao 3 taona 6 volana lasa izay #73
Mitady ny faritra manodidina ny 117 sy 123. Tsy ao izy ireo. Ao amin'ny scenery.cfg, ny faritra farany manodidina dia 115-Add on Scenery, tsy ao mihitsy, fa mbola mitohy ny fahadisoana. Izany no hany lozisialy izay mampisy olana, hatramin'izao.
Ary koa, ho an'ny Island-BNN-2 FSX dia simba ratsy.
FSX ary ianao 3 taona 6 volana lasa izay #95
Taorian'ny fiezahana hampifangaroana ilay VC sy Thomas Thomas A330 voalaza, dia ratsy ny valiny. Tsy maintsy nesoriko ny iray tamin'ireo A330s, dia tapaka be ilay izy. Tsy tiako ny hanome anao ny hevitra hiombona izany saingy tsy hitako izay fomba hanaovana azy.
FSX ary ianao 3 taona 6 volana lasa izay #97
Dariussssss nanoratra hoe: Rehefa niezaka ny hanambatra ny VC sy Thomas Thomas A330 voalaza, dia ratsy ny vokatra. Tsy maintsy nesoriko ny iray tamin'ireo A330s, dia tapaka be ilay izy. Tsy tiako ny hanome anao ny hevitra hiombona izany saingy tsy hitako izay fomba hanaovana azy.
ry jiosy c'mon..you're ny ny kofiko eto
Ireto ny fizahana teknolojia: www.rikoooo.com/board?view=topic&catid=5&id=34 :P
FSX ary ianao 3 taona 6 volana lasa izay #99
OK, malahelo aho.
FSX ary ianao 3 taona 6 volana lasa izay #130
Dariussssss nanoratra hoe: OK miala tsiny, ny ratsy.
Tsy misy mampalahelo Ny lehilahy, TSY MIVOAKA ny fiaramanidina afaka manasa sy maniry lol
FSX ary ianao 3 taona 5 volana lasa izay #177
Salama daholo, lehiben'ny mpiasan'ny USAF efa misotro ronono / manidina amin'ny ankapobeny aho MATS aka Military Air transport Service / C97 no Plane tiako indrindra. Izaho koa dia manidina sidina Reeve AA manerana an'i Alaska sy ny nosy Aleutian The Lockheed L-I88 Electra Is amin'ny fiaramanidina ankafiziko indrindra any avaratra lavitra indrindra. Izaho dia mpankafy mahery an'i Convair ny B-36, The B-58 Hustler tsara indrindra mijery Bomber tsy maintsy manidina / sy ny fiaramanidina mahafinaritra 880/990. Manidina amin'ny Capsim 707 & 727 aho add-ons mendrika ny vidiny. 80 ora eo ho eo fotsiny eo aho no mbola mianatra sy manao fanazaran-tena mandritra ny fotoana rehetra ..
FSX ary ianao 3 taona 5 volana lasa izay #183
Voalohany amin'ny FCAIR .... misaotra anao noho ny fanompoanao ho an'ny firenentsika. Ny fianakaviako dia nanompo ho an'ny taranaka 6 ankehitriny, tao amin'ny sampana tsirairay fa Coast Guard. Tsy misy teny azoko atao mihitsy ny maneho ny fankasitrahako anao. Te-hanompo saingy mampalahelo, dia voafetra ny Civil Air Patrol (izay nahafaly ahy hatramin'ny farany ny heh).
Nahazo ny CS 707 sy ny LOVE koa aho. Manomboka 'er up dia zavatra tsy azoko hatramin' izao tsikaritra lmao mbola mila mamoaka lahatsary youtube lol ny CS C-130 dia tantara hafa lol
Manaraka mpisera (s) nanao hoe: Misaotra: FCAIR
Board Categories About Rikoooo - Mpikambana vaovao tonga soa - Soso-kevitrao - Fampandrenesana Flight Simulators Forums - Flight Simulator 2020 (FS2020) - Lockheed Martin Prepar3D (P3D) - Flight Simulator X (FSX) sy Steam - FS 2004 - Taonjato iray an'ny sidina - X-Plane Media - Screenshots - Videos Hangar Talk - Fifanakalozan-kevitra ankapobeny - Feon-kiraro - Inona ary aiza no nanidina anio - Fiaramanidina tena izy Hafa sidina simulators - simulator flight flight - - Momba ny FlightGear - SERSY DCS - BENCHMARK SIMS